Maalinta: Noofambar 1, 2017
Iran waxaa loo furi doonaa Uzbekistan
Madaxweynaha warbaahinta Afghanistan Ashraf Gani ayaa sheegay inuu booqan doono Uzbekistan mustaqbalka dhow si uu u saxeexo heshiisyo iskaashi oo dhex mara labada dal. Mid ka mid ah mowduucyada ugu waaweyn ee laga wada hadalo kooxda Uzbek waa duurka isgaarsiinta tareenka. [More ...]
Iyada oo mashruuca beddelka ee gaadiidka dadweynaha ay ku leedahay Dowladda Hoose ee Magaalada Manisa, dalabka wareejinta ayaa ka bilaabmay gawaarida gaadiidka dadweynaha kuwaas oo noqday kuwa aad u deggan oo raaxo badan. 60 waa kii labaad oo la sameeyo daqiiqado [More ...]
Olympos Cable Car ee degmada Kemer ee Antalya oo leh 9 sanadkan, qiyaastii 200 kun oo qof ayaa u dhaqaaqay shirkii buurta Tahtalı Mountain. Ka dib socdaal raaxo leh oo soconaya ku dhawaad ​​daqiiqado 12, baabuurka fiilada ayaa bixiya martidooda 2. [More ...]
Si buuxda Markii 38 ay ka soo bilaabatay wax soo saarka Mersin sannado ka hor, Hasan Şemsi, oo qaba in si loo awoodo inuu la tartamo wax soo saareyaasha ku sugan Marmara, Ankara iyo İzmir, waa inuu isbedel ku sameeyaa wax soo saarka, wuxuu aasaasay Berdan Bolt fahamkan. Shakhsiyadda 5 ee Tarsus [More ...]
Madaarka Carsamba ee Samsun Carsamba, oo loo xidhay ku dhawaad ​​3 bilood ka hor shaqada dayactirka ee marinka la maro, ayaa dib loo furi doonaa Nofembar. Gudoomiyaha Samsun Cusmaan Kaymak, ayaa sheegay in shaqooyinka laga bilaabay garoonka diyaaradaha 7 bilo kahor [More ...]
Shirkadda 17 horay ayey u heshay faylka Neddere metro
Qandaraaska caalamiga ah ee 7.2 ee dhismaha 20 kiiloomitir F.Altay-Narlıdere Metro Line ee İzmir Metropolitan Munisember bishii Diseembar wuxuu abuuray farxad weyn qaybta dhismaha. 20 ayaa ku dhawaaqday ogeysiiska jilitaanka ee Oktoobar [More ...]
Bixinta adeegyada dadweynaha tan iyo markii la aasaasay 1856, TCDD waxay noqotay aag ay shirkadaha gaadiidka gaarka loo leeyahay ay lacag ka samayn karaan. TCDD, oo bixinaysay adeeg dadweyne tan iyo markii la aasaasay 1856, hadda waa [More ...]
Tababaraha ka hooseysa Tareenka ee Izmir
Halil Bingöl, 19, oo ku yaal halkapınar station ee İzmir, wuxuu ku dhintey tareenka İZBAN. Marka loo eego macluumaadka la helay; Dhacdadan ayaa dhacday maalintii shalay safafka 23.00 ee xarunta İZBAN Halkapınar. Halil Bingöl, [More ...]
RayHaber 01.11.2017 Warbixinta Shirka
Ma jiraan diiwaanada qandaraaska ee taariikhda 01.11.2017 ee nidaamkayaga.
Samsun Logistics Village ayaa noqon doonta albaabka udubdhexaadka ah ee 5 kun qof
Cem Seymen, oo qaadi doona sheekada Samsun Logistics Village shaashadaha Baadhitaanka Lacagta, wuxuu ahaa Duqa Magaalada Samsun Metropolitan Yusuf Ziya Yılmaz. mashaariicda gaadiidka Samsun Turkiga, kaas oo marti Caalamiga ah [More ...]
Wejiga beddelo Kocaeli Turkey
Midowga Degmooyinka Dunida Turkiga (TDBB) iyo Duqa Kocaeli İbrahim Karaosmanoğlu, Madaxweynaha Ururka İznikliler Basri Başbay iyo maamulka Ururka Tuulooyinka Gölcük Ergun [More ...]
Jamhuuriyada Jamhuuriga ee gaadiidka
Maalinta Burunlaş Republic, basku wuxuu isticmaalaa ilaa dhamaadka xNUMX'larını gaadiid nostalgia ah oo tagaya Bursa. Mid ka mid ah basaska Mercedes 1970H, oo la keenay sanadihii 1956 iyo 1959 oo loo adeegsaday illaa dhammaadka 1970, ayaa aamin u ah dowladnimadiisii ​​asalka ahayd. [More ...]
Adeegga Shaqaalaha waxaa la heli doonaa Agaasimayaasha Guud ee Jamhuuriyadda Waddooyinka Tareenka ee Waddanka (TCDD) 3. TILMAAMAHA MAAMULKA DIIWAANKA TCDD 3 Adeegyada Taageerada Gobol ee Agaasinka Horumarinta Ilmaha iyo Barista Xannaano-maalmeedka iyo Guriga Kalkaalinta Xannaano-maalmeedka [More ...]